Ubuntu Zesty Zapus, inotevera vhezheni yeUbuntu inogumisa arufabheti | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rapfuura Ubuntu yakaburitsa vhezheni yayo nyowani, iyo inozivikanwa se Ubuntu 16.10 Yakkety Yak. Iyo vhezheni itsva iyo vazhinji vatove kuyedza asi kuvandudzwa kweUbuntu hakusi kupera ipapo. Semazuva ese, Mark Shuttleworth ane yakaziviswa zita remadunhurirwa reiyo inotevera Ubuntu vhezheni: Ubuntu 17.04.
Mune ino kesi, Ubuntu 17.04 nickname ichave Zesty Zapus kana kuti pane simba rine mbeva. Kunyangwe idudziro dzichiita kunge dzinovhiringidza uye pakati pekusiyana uye mazwi eShuttleworth, vazhinji vachiri kusahadzika neshanduro iyi.
Asi chinonyanya kufadza pane izvi, harisi zita remadunhurirwa raZesty Zapus asi icho chokwadi chekuti ndiro izwi rekupedzisira remavara ayo Ubuntu anoshandisa. Vaya imi munoziva uye munoteedzera nhoroondo yeUbuntu, muchaziva kuti iyi yakasarudzika kugovera zita remadunhurirwa vhezheni yavo neshanduro uye zita remhukaZvese zviri zviviri chirevo uye mhuka zvinotanga nevara rimwe chete uye zvinoteera marongero ealfabheti.
Zesty Zapus ichave yekupedzisira Ubuntu mhuka, kana pamwe kwete?
Kana arufabheti yaizopera, vazhinji vakayambira uye Vakakumbira Ubuntu kuti ive kuburitswa kwakasununguka, asi Nharaunda yakaramba, chimwe chinhu chingashanduke mushure meUbuntu 17.04 senge dzimwe nzira kutsika iyi iyo inokwezva kutarisisa kwakanyanya kune vashandisi veUbuntu haisati yatariswa.
Mutungamiri anokwezva weUbuntu akayambira kuti kunyange hazvo zvese zvakatanga seprojekti yevashandisi vazhinji, ikozvino Ubuntu inoita kuti mushandisi weGnu / Linux aite zvinhu nekukurumidza uye zvakanyanya, nesimba guru, sekunge riri zest zapus. Ini ndinoda zita remadunhurirwa reiyo nyowani Ubuntu vhezheni, asi chimwe chinhu chinondiudza icho zita remadunhurirwa rino harizove rekupedzisira reUbuntu asi kutanga kwekuunganidzwa kutsva kwemazita emadunhurirwa ayo achaita kuti Ubuntu ienderere mberi neprojekti yayo, kunyangwe iri kuramba ichipararira ichienzaniswa nekumwe kugoverwa Haufungi here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu Zesty Zapus, inotevera vhezheni yeUbuntu inogumisa arufabheti
Nechikonzero chipi ivo vakaramba kuramba kuburitswa? Kana ivo vakaishandisa, yakawedzerwa kune snap mapakeji, yaizodzokera kuUbuntu. Zvichakadaro, ndinogara kuArch.
Felix Puga Henríquez (@fpugahenriquez) akadaro
Zvingave zvinonakidza kuzviita sezvinoita OpenSuse .. yayo RR vhezheni uye Yakagadzikana - ichave yakanaka, inonakidza, nekuti iwe waizovhura zvirinani shanduro dzekureba kurekesa kubatanidza desktop uye server - nepo iyo RR yevanonyanya kupererwa.
Pindura kuna Félix Puga Henríquez (@fpugahenriquez)
Yekutanga RC yeKernel 4.9 yave kuwanikwa